Corporate chitupa bhuku: chii uye nzira yekugadzira imwe | ECommerce nhau
Corporate chitupa bhuku: chii uye nzira yekugadzira imwe
Encarni Arcoya | 07/08/2021 17:43 | Yakagadziridzwa ku 29/08/2021 19:31 | Marketing
Makambani mazhinji anoshandisa bhuku rekuzivikanwa rekambani pakati pezvinyorwa zvemukati. Iri bhuku, rakawedzera kana kushomeka, rakakosha kuchengetedza kuzivikanwa kwekambani, pasina misiyano inogona kukanganisa vatengi.
Asi, Chii chinonzi bhuku rekuzivikanwa rekudyidzana? Ndeapi mabhenefiti ayo anokupa iwe? Unogadzira sei imwe? Kana iwe uchida kuziva zvese nezve ichi gwaro, iwe unongofanirwa kutarisa kune iyo gwara ratakugadzirira iwe.
1 Chii chinonzi yemubatanidzwa chitupa bhuku
1.1 Corporate chitupa bhuku vs brand bhuku
2.1 Iwe unozochengetedza nguva uye zviwanikwa pamwe nekambani chitupa bhuku
2.2 Une kuenderana kukuru
2.3 Iwe unopa mufananidzo uri nani kune vatengi
3 Maitiro ekugadzira bhuku rekuzivikanwa rekudyidzana
3.1 Maumbirwo ebhuku rekuzivikanwa rekudyidzana
3.1.1 Nhanganyaya yebhuku rekuzivikanwa bhuku
Chii chinonzi yemubatanidzwa chitupa bhuku
Chinhu chekutanga chaunoda kuziva ndechekuti izwi rekuti corporate corporate bhuku rinoreva chii. Mune ino kesi, tiri kutaura nezvegwaro rebhizinesi rinosimbisa iyo mirau uye nhungamiro dzinofanirwa kuteverwa mukambani kupa nekuchengetedza chitarisiko chinoonekwa chevatengi pamwe nevashandi.
Mune mamwe mazwi, zvazvinoita ndizvo simbisa musimboti wekuti graphic element yezviratidzo ichave sei uye maitiro ekuishandisa, zvese zviri online nepamhepo. Zvinhu zvakaita serudzi rwe logo, mavara, mafonti ...
Aya manyowani anogona kuve akakosha kwazvo, kunyanya kumabhizinesi madiki, kana makuru akakura emanyowani mumakambani makuru. Uye ndiani anoashandisa? Eya, makambani akadai seVodafone, Endesa, Adidas ... Ivo vanogadza nhungamiro yekutevera, kwete nemarogo chete, asi mune zvimwe zvinhu zvakawanda senge kushambadza mumidhiya, zvigadzirwa, zvinyorwa, zvinyorwa, kushambadzira kweterevhizheni, masocial network, kushongedza ezvitoro, nezvimwe.
Corporate chitupa bhuku vs brand bhuku
Wati wambofunga here kuti yemubatanidzwa chitupa bhuku uye chiratidzo chiratidzo ibhuku zvakafanana? Chokwadi YES. Asi chokwadi chakatosiyana.
Zvinhu zvese zviri zviviri zvinoita kunge zviri nezvechinhu chimwe chete, asi hazvisi. Nepo bhuku rekuzivikanwa rekambani rinotarisana nechikamu chakajeka cheiyo chiratidzo, kuzivikanwa kwechiratidzo icho, bhuku rebhuku harisi kungogara chete pa «base», asi inoenda zvakadzama, kunyange kuratidza zvinhu zvisingakwanise "kubatwa" senge tsika dzemakambani, matauriro ezwi, nzira yekutaurirana nevanogona vatengi, zvichingodaro.
Nekudaro, pakuvaka rimwe gwaro uye rimwe, kunyangwe vachigona kuenda pamwe chete, bhuku rekuzivikanwa rekambani rinongogara chete pahwaro hwezita rezita.
Haasi makambani mazhinji ane bhuku rekuzivikanwa rekushandira uye, zvakadaro, kuvapo kweimwe, pamwe nekuishandisa kwayo, kune mabhenefiti mazhinji ayo, pamwe, iwe usina kunge waona. Tinozvipfupisa:
Iwe unozochengetedza nguva uye zviwanikwa pamwe nekambani chitupa bhuku
Fungidzira kuti unoshandira munhu. Unomupa kushanya kwekambani uye kumuudza zvese zvaanoda kuti azive nezve kuzivikanwa kwekambani… Izvo zvinotora nguva, uyezve munhu anomudzidzisa zvese haakwanise kushanda panguva yekushanya kune uyu mushandi.
Asi ko kana mushandi mutsva akasvika vhiki rinotevera? Iwe zvakare ungatambise maawa akati wandei enguva yako, uye nazvo zviwanikwa izvo iwe zvaungave uri kushandisa zvimwe zvinhu.
Bhuku rekuzivikanwa rekubatana inokutendera kuti utambise nguva shoma, ingopa mharidzo pfupi uye nyora pasi ruzivo rwaunoda kuti uite basa rako nemazvo kukambani.
Une kuenderana kukuru
Kazhinji, kunyanya nekufamba kwenguva, vanhu vanowanzo kanganwa iyo mitemo yakateedzerwa pakutanga. Zvinoita sekunge isu takapa rakakura ruoko kune zvimwe zvinhu, uye izvo, pakupedzisira, zvinotora muripo wayo kukambani.
Naizvozvo, kuti udzivise, kuve nemitemo uye kutaurirana kuburikidza nekambani yekuzivikanwa bhuku kunobatsira kusavakanganwa uye kuva ne "muyero" wakaenzana kune vese.
Iwe unopa mufananidzo uri nani kune vatengi
Nekuti nekuve nekambani yekuzivikanwa bhuku iwe uri kutaurira vatengi kuti une hanya nekuti kune kumhanya kwakanaka kwebhizinesi uye kuti iwe unotaurirana nevashandi vako kuitira kuti vazive nezvese zvavanoda kuti vazive nezve kambani.
Maitiro ekugadzira bhuku rekuzivikanwa rekudyidzana
Kutarisa pamabatiro aunofanira kuita bhuku rekuzivikanwa rekambani, chinhu chekutanga chaunofanira kujekesa nezvacho mhando yeruzivo iwe yauchazoda kuti uigadzirire.
Mune ino kesi, inofanirwa kutsanangurwa, nekuti isu tinotaura nezvezvinhu izvo zvisingafanirwe kuchinja kazhinji (nekuti zvazviri ndezvekuti vatengi vanoshamwaridzana nechiratidzo, usachinje ivo vaviri kana vatatu):
Zvese izvi zvakakosha mubhuku rekambani chitupa, asi zvakadii nezvechimiro? Isu tinozvityora iwe.
Maumbirwo ebhuku rekuzivikanwa rekudyidzana
Gwaro iri rinofanirwa kuteedzera kuitira kuti ruzivo rwese rwunzwisiswe uye hapana kusahadzika kana matambudziko kana uchinge warishandisa mumabasa kana chero chishandiso chinoitwa (terevhizheni, mhizha, mabhodhi, nezvimwewo).
Chimiro chingave chinotevera:
Nhanganyaya yebhuku rekuzivikanwa bhuku
Mairi iyo inotaura nezve huzivi, hunhu, hunhu uye matauriro echiratidzo icho chainacho. Izvo zvakakosha kuti ujekese chikamu ichi sezvo iri hwaro hwekunzwisisa chikonzero chezvese zvimwe zvinhu.
Iyo logo chikamu chakakosha cheiyo graphic kuzivikanwa kwechiratidzo. Neichi chikonzero, iyo dhizaini, mavara uye mashandisiro.
Zvimwe zvinhu zvinofanirwa kuratidzwa ndezve, semuenzaniso, iyo nzvimbo inofanirwa kusiiwa yakatenderedza logo kuitira kuti irege kutaridzika kunge yakaremerwa, kana iyo yakanyanya uye shoma yeiyo logo isina kuita kuti irege kuverenga kana kutaridzika kunge kujeka.
Zvakare pano panogona kuve nechikamu chekusiyana kwechiratidzo, kuitira kuti uone kuti zvaizotaridzika sei nemavara akasiyana, mafomati, nezvimwe.
Kunyangwe isu takambotaura kuti iwo mavara akatovharwa mu logo, mune ino kesi inonanga mukati memavara, kunyanya iwo mavara emavara, ayo anogona kumisikidzwa pakati pezvitatu: RGB, CMYK, HEX kana Pantone (iyo yekupedzisira ndiyo yakanyanya kushandiswa nekuti inobvumidza iyo vara iyo inoshandiswa kuve iyo iri chaizvo yakadhindwa, mune imwecheteyo tonality).
Chikamu chekuumbwa chinosimbisa iyo inokosha mitemo icho dhizaini chinofanirwa kuve nacho kuitira kuti chienderane nezvamunoda kuti zvibudirire zvinoonekwa kubva kuchiratidzo.
Pamusoro peiyo logo, maekisheni uye zvimwe zvinhu zvakakosha, uye zvinofanirwa kutevedzera maitiro echiratidzo zvacho zvizere. Saka pano zvinhu zvakasiyana sehukuru zvinotsanangurwa yeaya, iwo mavara avanozove nawo kana vasina kumanikidzwa uye pavanotsimbirirwa, kana vachinge vaine ruzha kana kwete, kana iwo mavara avanazvo achachinja, nezvimwe.
Mune ino kesi isu tiri kutaura nezvayo Image bhengi iyo kambani ichave nayo pane iyo pachayo zita. Dzinogona kuve mifananidzo asiwo mifananidzo, mifananidzo ... dzese dzinofanirwa kunge dziri dzemhando yepamusoro uye dzichirapwa nemazvo kusimudzira chiratidzo chechiratidzo.
Pakupedzisira, isu tine typography, ndiko kuti, iyo mhando yefonti inoshandiswa mukumaka. Pano, zvakakosha zvinhu senge font saizi, rudzi rwekupatsanura, kungave kune rima uye / kana akareruka mamiriro ari kushandiswa, kungave kuchave nemisoro (H1, H2, H3 ...) uye ndima kana ndima chete, nezvimwe. tsanangurwa apa.
Kana iyo kambani iri hombe, pamusoro peaya mapoinzi mune yemubatanidzwa chitupa bhuku, mamwe akasarudzika anosanganisirwa kune yega yega mafomu ayo ane: for media media, magazini, kushambadzira kwewebhu, terevhizheni, social network, nezvimwe.
Zviri kujekesa kwauri izvozvi kuti iro bhuku rekuzivikanwa rekambani chii?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Corporate chitupa bhuku: chii uye nzira yekugadzira imwe
Chii chinonzi kushamwaridzana kushambadzira
WordPress neWPO: maitiro ekuvandudza kumhanya kweecommerce yako